Migumisiro Yokubatanidza Kunyanya Kugadzirisa - SEO Advice Kubva Semalt Expert, Natalia Khachaturyan
Sezvo mawebsite achienderera mberi nekugadzirisa zvinyorwa zvevashandisi kuti vatarise paIndaneti, dambudziko rekugadzirisa kwepamusoro rinogona kupinda mukati. Mumazuva apfuura, nyaya dzakadai sezviripo chakavanzika uye keyword stuffing zvinogona kuumba kudhinda kwema digital pepa ne nzira dzisiri dzezvakanaka dzekunyoresa. Mune zvimwe zviitiko, vamwe webmasters vanomirira zviratidzo zvekunze uye motokari kutumira juisi yavo yekubatanidza kumunda wavo. SEO tsanangudzo inobva kune vakawanda vari pa-peji uye panze-peji yakagadzirisa zvikamu, izvo zvose zvinotarisirwa kuwedzera webhusaiti inoonekwa kune vavanoteerera - schnell umziehen von.
The Content Strategist Semalt , Natalia Khachaturyan, anotsanangura kuti vazhinji "pasina" nzvimbo dzekutengeserana kwekombiyuta zvinogonawo kukonzera njodzi yakakwirira yepamusoro-soro yewebsite. Uyezve, Google iri kuita kukanganisa kwe "maitiro" kana "kusina kusimba" kunobatanidza chinangwa chekuwedzera chiremera chemasimba mune chimwe chinangwa chinowanikwa. Nyaya dzakawanda dze SEO masangano mazuva ano pfungwa pamusoro penyaya yekubatanidza yeimba yavo yavanenge vazoisa mune yavo yekudhirodhaza chirongwa. Kuti udzivise mamiriro ekugadzirisa kusangana, iwe unogona kudzidza nezvemhando dzehutano, dzakakodzera kutumira juisi yekubatanidza pamwe chete nehutano hwehupano uye nhoroondo yeizinda.
Zviratidzo zvekubatanidza kudarika-kugadzirisa
Google inotarisana nehurongwa hwekugadzirisa hutsika husina kujairika maererano nehutendeji..Nokudaro, zviri nyore kuziva "zvisiri izvo" maitiro pamusoro pekushanda kwehumwe hukama huri paIndaneti. Somuenzaniso, mawebsite akawanda mazuva ano ane blog. Nhengo dzekudzoka kwechirongwa pamwe nemagwaro anchor anowanikwa muhutano hwehuwandu hunotevera hutsika. Kunyanya kushanda kwakafanana nepamusoro pemigwagwa yepasi pose kunogona kuwedzera kunyunyuta kwemawebsite nekubatanidza zvakanyanya. Mukudengenyeka kwechangobva kuitika, Google inogona kukurumidza kukanganisa kuvimba kune dzimwe hukama hunotaura kune dzimwe nzvimbo dzakadaro. Muchiitiko ichi, izvi zvinobatanidza jisi zvinogona kuregererwa zvichiita kuti kutama kusabatsire kushanda kwako.
Somuenzaniso, webhusaiti inogona kutanga kutora motokari yakananga inobva kune nzvimbo 20 dzakasiyana mune imwe niche yakapiwa. Kubva pakucherechedza zvakadzama, mawebsite aya anobatana. Izvi zviitiko zvinogona kupa chikwata chekubatana kwechisikigo kubva kune nhoroondo yezvakaitika uye maitiro. Kuwana 90% kunogona kuunza chimwe chinhu chinogona kuita kuti webhusaiti ionekwe sepammy. Munguva yakapfuura, mashizha makuru emabhiza eSeO achazarura nzvimbo dzakasiyana dzekubatanidza mapurogiramu evashandisi vavo kana mawebsite webitendi.
Paunenge uchigadzirisa zvinyorwa zvewebhu, zvakakosha kutevera nzira yepanyama yekuisa magwaro anchokwe. Kuisa mvumo yakawanda yakawanda pamagwaro kunogona kuwedzera kusafungirwa kwekunge kugoverwa kwechisiko kwemashoko ayo Google inotarirwa pakugadzirisa mavheti. Zvisungo zvisinganzwisisiki zvekunze zvinowanzobatana kune mumwe nemumwe zvinogona kubatsira kana kukuvadza kufambira mberi kwe SEO pane webhusaiti.
Mawebhusayithi asingateereri kumirairo yemitemo yepamutemo inowanzova pangozi yekurangwa. Mune zvimwe zviitiko, nzvimbo dzinogonawo kutambura nekunyengedzwa kunyanya kana dzichiita muhomwe dzakawanda dzemauto dzeSeO tactics. Google inopa vadziki vepawebvu kuti vafunge nezvehutano hwemashoko ayo vanhu vanobatanidza kumawebsite avo. Mune dzimwe nguva, magwaro anchoti anogonawo kuva chinhu chinokonzera kugadzira kudhindwa kwema digital kuderera. Iyi SEO nhungamiro inogona kukubatsira kuona zviitiko apo webhusaiti yako inogona kutambura nekugadzirisa.